/ब्लग/तौल घट्नु/विश्वको शीर्ष 10 उत्तम बेचन वजन घटाने पाउडर पूरक
प्रकाशित 09 / 01 / 2018 by 阿斯劳 मा लेखियो तौल घट्नु.
तौल घट्नु औषधि इतिहास
पहिलो वजन घटाने औषधी, समय मा वसा कमिर्सको रूपमा उल्लेख गरिएको, 1800 हरूमा उपलब्ध भयो। यद्यपि ड्रगले केही गम्भीर साइड इफेक्टहरूको कारण बनायो, यो 1960s सम्म प्रयोगको लागि उपलब्ध रह्यो।
डिनिट्रोफेनलको रुपमा जानिएको एक नयाँ औषधि 1930 मा पेश गरियो र यो वजन घटाने को प्रबन्ध मा धेरै लोकप्रिय भयो। दबाइ शरीर भित्र थर्मोगेनिक प्रभाव उत्पन्न भयो, वजन घटाने को सुविधा।
मध्य-1950s मा, एम्फेटामिनहरू उपलब्ध भए र छनोटको वजन घटाने औषधि बन्न सक्यो। यो भूख suppressing द्वारा वजन घटाने को सुविधा। दुर्भाग्यवश, यो पुर्मनरी उच्च रक्तचाप को खतरा बढयो, जसको कारण 1968 मा बजार देखि उनको हटान भयो।
1970s मा, एडेड्रिड वजन घटाने को लागी एक निर्धारित उपचार भयो। तथापि, दबाइले केही प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न गर्यो जसले गर्दा यो एउटा खतरनाक पदार्थ घोषित भएको छ।
1973 मा, फेनेफुरामिन को वजन घटाने पूरक को रूप मा अनुमोदित भयो। यसको लोकप्रियता 1992 मा अधिक भयो जब यो फेंटेर्मिन को साथ संयुक्त फेन-फेन को रूप मा जाना एक वजन घटाने वाला औषधि बनाइयो थियो। दुःखको कुरा, दबाइले केहि प्रतिकूल प्रभावहरू उत्पन्न गर्यो, जसले 1997 मा बजारबाट निकासी गर्यो। 21 सदीमा, वजन घटाने औषध, धेरै हर्बल ढाँचामा आधारित, बजार बाढी।
वजन घटाने औषधि वर्गीकरण
वजन घटाने औषधिहरु को उनको मुख्य तंत्र को अनुसार तीन प्रमुख श्रेणियों मा वर्गीकृत गरिन्छ र निम्नानुसार छन्:
(1) भूख suppressant (आहार)
ड्रग्स जुन कम खानाको सेवन सहानुभूतित्मक एजेन्टर भनिन्छ। तिनीहरू सामान्यतया धैर्यता सुरू गर्नु अघि सामान्यतया भूख दगुर्छन्। Satiety भनेको खाना लिने क्रममा प्राप्त "पूर्ण" भावना वा सन्तुष्टि हो। मानव मस्तिष्कमा एक न्यूरोट्रांसमीटर को गुमाएर भूख suppressants प्रकार्य जो कि भूख नियन्त्रण गर्दछ, नाउडेनानेलिन (NA) को रूपमा चिनिन्छ।
यी ड्रगहरू NA सँगै समान रासायनिक ढाँचा साझा गर्छन् र सक्छन्; नतिजा न ननाडेनानेलिनको रूपमा समान रिसेप्टरहरूमा बाँध्छ।
सहानुभूतित्मक एजेन्टको रासायनिक संरचना।
ड्रग्सले मानव मस्तिष्क, हाइपोथेमसस "फीडिंग सेन्टर" मा नन्देनानेलियन गतिविधिलाई पनि सुधार गर्दछ। मानव हाइकोमोलाममस शरीर प्रणालीमा ऊर्जाको सन्तुलन नियन्त्रण गर्दछ। व्यक्तिगत ऊर्जा भण्डारहरूको बारेमा जानकारी हाइपोथेमसमा संश्लेषित गरिएको छ जसले खाद्य सेवन र भूखको व्यवस्था गर्दछ। नोराडेननालिन बाध्यता र हाइपोथोमससमा गतिविधिले भूखमा कम असर पार्छ। यस्ता औषधीहरू यसमा समावेश छन्:
① सिबूत्रामिन एचसीएल (मेरिडिया) सीएएस: 84485-00-7
② Lorcaserin एचसीएल (Belviq) सीएएस: 1431697-94-7
③ रिमोनाबांट एचसीएल सीएएस: 158681-13-1
(2) फैट बर्निंग
फैट जलविद्युत वजन घटाने औषधीले मद्दत गर्न सक्छ बोसो हानि cravings को कम गरेर, चयापचय को बढ़ाने, र एक स्वस्थ भूख को बनाए राखन। तिनीहरूले ऊर्जा र फोकस बढाएर कसरत क्षमतालाई अधिकतम गर्न सक्छन्। यस्ता औषधीहरू यसमा समावेश छन्:
1. सिफिफाइनेंस सीएएस: 94-07-5
2. DMAA / 1,3-Dimethylpentylamine सीएएस: 13803-74-2
3. क्लेनबर्टोलोल एचसीएल सीएएस: 21898-19-1
4. साल्बूतमोल (अल्बर्टोल) सीएएस: 18559-94-9
(3) पाचन सुधार
यी वजन घटाने औषधीहरूले पाचन प्रणालीलाई खानामा विशेष पोषक तत्वहरू अवशोषण गर्न हस्तक्षेप गरेर काम गर्दछ। उदाहरणको लागि, ओर्लिस्टरेट वसा ब्रेकडाउन रोक्न जानिन्छ र त्यसैले वसा अवशोषण रोक्छ। धेरै अन्य पूरकहरु कोलोरी अवशोषण को कम गर्न र पाचन को रोकथाम मा लागू गरिएको छ। यस पोस्टमा, हामी निम्न प्रकारका लागू औषधिहरूको बारेमा थप छलफल गर्नेछौं:
वजन घटाने औषध विवरण
तल उल्लिखित सबै लागू औषधहरूको विस्तृत विवरण एक संक्षिप्त छ।
(1) भूख suppressants (आहार)
Sibutramine एचसीएल सबैभन्दा लोकप्रिय भूख suppressants मध्ये एक हो। यसले मस्तिष्कमा serotonin र एनए स्तर दुवैलाई दोहोर्याउँछ, जसले पछि रिचप्टरहरूलाई सन्तुष्टि र भूख को नियन्त्रण गर्न बाँध्छ।
सिबुट्रामिन उपचार आहार र व्यायामको साथ संयुक्त हुन सक्छ एक्लै व्यायाम र आहार मात्र भन्दा 4.6 किलो र अधिक वजन कम हुन्छ। खाद्य सेवन को कम गर्न को साथ, sibutramine को पनि पाया छ:
• थर्मोजेनसिस बढाउने
• हृदय हृदय जोखिम कारकहरू बढाउनुहोस्
• केन्द्रीय मोटापा बढाउनुहोस्
• कमोरिड मधुमेह संग रहने वाले रोगहरुमा रक्त ग्लूकोज बढाएं
• लिपिड प्रोफाइल बढाउनुहोस्
• सी-पेप्टाइड, इन्सुलिन र यूरिक एसिडको स्तर बढाउँछ
सिबुत्रामिन एचसीएलको रासायनिक संरचना
Lorcaserin एचसीएल (Belviq) को रासायनिक संरचना
Lorcaserin एचएलसी औषधि चयापचय र भूख नियन्त्रण गर्न कार्य गर्दछ। औषधि 2012 भन्दा बढी मान्छे को लागि 30 को एफडीए द्वारा अनुमोदित गरिएको थियो 27 भन्दा अधिक बीएमआई, र2को शारीरिक मास सूचकांक या अधिक को लागी जो कोलेस्ट्रॉल, रक्तचाप, र2मधुमेह को प्रकार हो। औषधिले मानव मस्तिष्कमा सीरोटोनिन XNUMXCV रिसेप्टरलाई बढाउन कार्य गर्दछ जसले रोगीहरूलाई कम गर्न पछि पूर्णतया महसुस गर्न मद्दत गर्दछ।
चिकित्सा परीक्षणहरुमा, 38% वयस्कों (बिना टाइप2मधुमेह को बिना) 5% को शरीर को वजन को अधिक देखि अधिक गुमाए, 16 को तुलना मा placebo संग उपचार वाला वयस्कों को%।
रामानाबान्ट एचसीएलको रासायनिक संरचना
Rimonabant एचसीएल औषधि एक अद्वितीय चयनकर्ता कैनोबिनोड - 1 (सीबी - 1) रिसेप्टर विरोधी विरोधी को रूप मा कार्रवाई को यसको उपन्यास मोड को लागि अलग धन्यवाद। Endocannabinoids सीएनएस मा जारी छ र बाह्य मा lipogenesis, भूख, र मोटा संचय को उत्तेजित गर्दछ। Rimonabant एचसीएल endocannabinoids प्रभाव रोक्न कार्य गर्दछ।
दबाइ मौखिक प्रशासन पछि चाँडै अवशोषित हुन्छ। मोटाइ वा तौलिया रोगीहरूको उपचारमा यो औषधिको प्रभावकारिता चार नियन्त्रित, बेरोजगारी गरिएको परीक्षणको कार्यक्रममा अध्ययन गरिएको थियो, जो आरओओ (रिबेनब्याट ओबेसिटी) को कार्यक्रम भनिन्छ। यी परीक्षणहरूमा, यस औषधीलाई orlistat र sibutramine को रूपमा प्रभावकारी रूपमा फेला पर्यो।
2,4-Dinitrophenol (DNP वा 2,4-DNP ओ) यो सूत्र र रासायनिक ढाँचाको साथ एक जैविक रसायन हो: HOC6H3 (NO2) 2।
डीएनपी प्रकार्यको प्रोटोनोफोरको रूपमा, प्रोटोन लीक भित्र आन्तरिक माइकोमोन्डलल झिल्लीमा र यसैले बाईपास एटीपी संश्लेषण। यसले एटीपी ऊर्जा संश्लेषण कम कुशल बनाउनेछ। फलस्वरूप, श्वसनबाट उत्पन्न हुने केहि ऊर्जाहरू गर्मीको रूपमा बर्बाद गरिन्छ।
अपर्याप्तता औषधि को खुराक को सीधा आनुपातिक रूप देखि आनुपातिक हुन्छ। औषधि खुसी बढ्दै जाँदा, ऊर्जा उत्पादनलाई कम अपर्याप्त, चयापचय दर बढेको छ (वसाको उच्च मात्रामा जलाइन्छ) ऊर्जा मागहरू पूरा गर्न र असक्षमताको क्षतिपूर्ति। डीएनपी अक्सिफेटिव फास्फोरिलेशन को लागि ज्ञात सर्वोत्तम एजेन्ट मध्ये एक हो। एटीपी संश्लेषण द्वारा एडीपी को फास्फेरलाइशन "अक्सान्डेशन देखि अचानक या विच्छेदित हुन्छ।
(2) फैट बर्निंग तंत्र
① सिफिफाइनेंस सीएएस: 94-07-5
यौगिक p-synephrine एक alkaloid हो। यसको अर्थ यो एक कार्बनिक यौगिक हो जुन प्रकृति मा भेट्न सक्छ तर कम सावधानी। यौगिकमा नाइट्रोजनको आधारको रूपमा छ।
Synephrine को रासायनिक ढाँचा
कैफीन, निकोटीन, र मार्फिन पनि शोधकर्ताहरु को अनुसार एल्कोलोड्स को वर्ग संग हुन्छ। सिफप्रिदम सामान्यतया भोजन व्यवस्थापन वा हानि र खेल प्रदर्शनका लागि आहार पूरकहरूमा देखाइन्छ।
हाम्रो शरीरको प्रणालीमा कसरी सिन्फिफेरिन काम गर्दछ?
P-synephrine मा रसायनहरूले β3 एड्रेनेर्जिक रिसेप्टरहरूलाई उत्तेजित गर्दै तंत्रिका तंत्रलाई असर गर्छ जसले ब्रह्माण्डमा थर्मोजेनेसिस र लिपोलिसिसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ। यसको मतलब यो रिसेप्टरले तपाइँको प्रणालीलाई ऊर्जाको लागि मोटो जलाउन सक्षम पार्दछ।
③ DMAA / 1,3-Dimethylpentylamine सीएएस: 13803-74-2
Dimethylamylamine प्रयोगशाला मा सिंथेटिक एक औषधि निर्मित छ। 1,3-dimethylamylamine (डीएमएए) एक एम्फेटामिन डेरिभेटिभ हो जुन अमेरिकामा बेचिएको स्पोर्ट्स पूरक प्रयोगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ यो प्रारम्भिक रूपमा नैतिक निर्णयकर्ताको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो। आजकल, dimethylamylamine वजन घटाने, एडीएचडी (ध्यान घाटे उच्च रक्तचाप विकार), शरीर सौष्ठव, र प्रदर्शन को बढ़ाने को लागि प्रयोग गरिएको एक औषधी ड्रग को रूपमा मार्केट गरिएको छ।
④ क्लेनबर्टोलोल एचसीएल सीएएस: 21898-19-1
Clenbuterol, क्लेन को रूपमा पनि जाना जाता छ, एक decongestant र bronchodilator हो। यो सामान्यतया अस्थमा हमलाहरू विरुद्ध सुरक्षा गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो एक स्ट्रिइड-जस्तो यौगिक हो, तर वास्तविक स्ट्रिइड होइन। यो β2 agonists को कोटीमा आउँछ।
क्लेबर्टोलॉल एड्रेनालेन जस्तै जस्तो शारीरिक प्रतिक्रियाहरु प्रारम्भ गर्न सक्छ। यसले beta-2 रिसेप्टर सबटाइपहरूलाई एड्रेनर्जिक प्रणालीमा सक्रिय गर्दछ। यो CAMP को वृद्धि को परिणाम (एटीपी का व्युत्पन्न सेलुलर क्रस-टकका लागि आवश्यक छ)। नतिजाको रूपमा, प्रोटीन केनिज ए बढ्छ। प्रोटीन kinase ए एंजाइज हो जसले लिपid, ग्लियोकोजन, र चिन चयापचय गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्दछ। यसको वृद्धिले शरीरमा मोटो जलिरहेको असरलाई उत्प्रेरित गर्दछ। यसले अन्य मार्गहरू बढाउँछ जसले जैविक प्रक्रिया मार्फत फैट जलाइदिन्छ जसले फाइटी एसिड ओक्साइडेशन भनिन्छ।
फ्याट जलाएर शारीरिक कार्यहरू प्रदर्शन गर्न ऊर्जाको स्रोतको रुपमा प्रयोग गरिन्छ। यसले एटीपी को रिलीज गर्न मिटकोन्ड्रिया को उत्तेजित गर्दछ, जसमा चयापचय दर मा वृद्धि को लागी। यो व्यापक रूपमा थाहा छ कि चयापचय दर को वृद्धि मा वजन घटाने मा मदद गर्दछ।
⑤ साल्बूतमोल (अल्बर्टोल) सीएएस: 18559-94-9
रासायनिक ढाँचा को सालबुटोमोल (अल्ब्रुवोल)
सालबुटोमोल एक औषधि हो जसले पुरानो बाधाधारी पुल्मन रोग र अस्थमा र अन्य COPD-related विकारहरूको उपचार गर्दछ। दबाइको मोड एक्शन अस्थायी आक्रमणको बेला फेफड़ोंका सास फेर्ने बाटोहरू खुल्ला वा खुसी पार्दै छ। चूंकि सालबुटोमोलले एक उत्तेजना प्रभाव पारेको छ, केहि व्यक्तिहरूले यो अस्थमा औषधि प्रयोग गर्छन जसले वसा वा वजन घटाएर बढाउँछ।
Albuterol वजन घटाने को कार्यक्रम मा प्रयोग को लागि आदर्श छ किनकी यसको रगत को जस्तै एन्ड्रोजेनिक सिस्टम मा त्यहि प्रभाव छ। यसले मांसपेशियों को माला बनाउँछ र समग्र वजन कम गर्दछ।
यो शरीरबहिनीहरु द्वारा प्रयोग गरिएको छ आफ्नो शरीर को क्षेत्रहरु लाई अतिरिक्त वसा को कटौती गर्न को लागी को उपयोग गर्न को लागी मुश्किल हुन सक्छ या अन्य तरीकों को माध्यम ले वसा खो जान सक्छ। शरीरको बिरुवा र वजन घटानेका प्रकार्यहरूको लागि यो औषधी लिँदा, प्रायः प्राय: गोली वा तरल रूपमा लिन्छ। यद्यपि तपाईले वजनको लागि सालबुटोमोल ईन्डेलर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ बोसो हानि यदि यो मात्र उपलब्ध विकल्प हो।
Orlistat एक शक्तिशाली प्यान्रेreatic र गैस्ट्रिक लिपिस अवरोधक हो। सबै आहार ट्रिग्लिसराइड्स प्यान्ट्रेटिक र गैस्ट्रिक लिपिहरु को सहायता संग metabolized हो। लिप्स एंजाइमले ट्राइग्लिसराइड्सलाई मुक्त फैटी एसिडमा तोक्न सक्छ जुन पछिका साना आंतहरूमा अवशोषित हुन सक्छ। ग्यास्ट्रिक र अग्निरोधी लिपिस इन्फ्राईटरले सानो आंतको लुमेनमा प्यान्रेट्रेटिक र गैस्ट्रिक लिपिसहरूसँग बाण्ड बनाउँछ र यो एण्टिमिमेले सही काम गर्न सकेन।
यी लिपिहरु को कार्य को अवरोध को माध्यम ले, आहार को मोटा पाचन पनि अवरोधित छ, र ट्रिलीसेरसेड्स मल मा खुदाई जान्छ। Orlistat वजन घटाने औषधि मानव शरीर प्रणालीमा अवशोषित हुनबाट भोजनबाट पोषणशील वसन्तको 30 प्रतिशत रोक्दछ (जब भोजन मा ऊर्जा को 30 प्रतिशत ट्राइग्लिसराइड्स द्वारा आपूर्ति गरिन्छ)। एक वर्ष पछि औसत वजन कम गर्नका लागि जेनेरिक (orlistat) को संयोजन र जीवनशैलीमा परिवर्तनहरू whopping 8.5 किग वरपर वरपर छ।
आहार ट्रिग्लिसराइड्स को अवशोषण को कम गर्न को लागी, orlistat वजन घटाने पाउडर को लागि पाया गया छ:
• रक्तचापमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुहोस्;
• कोलेस्ट्रॉल अवशोषण घटाउनुहोस् र यसैले कोलेस्ट्रॉल स्तरहरू (एलडीएल कोलेस्ट्रलको साथमा);
• इन्सुलिन प्रतिरोध बढाउनुहोस्; र
• glycemic नियन्त्रण बढाउनुहोस्।
यो व्यापक रूपमा सोचेको छ कि orlistat जस्ट्रोटिस्टाइनल प्रतिकूल प्रभाव नकारात्मक सुदृढता को लागी एक तरिका मा कार्य गर्दछ, जो यस औषधि मा उन को प्रोत्साहित गर्न को लागि एक कम आहार आहार को कड़ाई देखि पालन गर्दछ।
Cetilistat एक मौखिक सक्रिय, उपन्यास, अग्निरोधी र जस्ट्रोटिस्टिनल लिपिस अवरोधक हो।
Cetilistat वजन घटाने औषधि एक मोटापे को उपचार को लागि निर्मित एक ड्रग हो। यो एक तरिका मा कार्य गर्दछ जस्तै ड्रिग्रेटिक लिपिस को नियंत्रित गरेर नैनिकल (orlistat) को रूप मा जानिन्छ मा चर्चा गरिन्छ, एन्जाइम जो हाम्रो आंतन मा ट्राइग्लिसराइड्स लाई तोड्छ। यी एंजाइमहरूको बिना, ट्राइग्लिसराइड्स हाम्रो खानाबाट निस्कने नि: शुल्क फैटी एसिडमा अवशोषित हुन सक्छ जुन शरीरबाट निस्किएको हटाइन्छ।
क्लिनिकल परीक्षणमा जो कोही पनि2मधुमेह र टाइप2मधुमेह संग रहन मोटाइ रोगहरूमा मोटेको रोगहरु समावेश गर्दछ। बाह्रौं हप्तासम्म कोटिसिलिस्टको वजन घटाने पाउडरमा राखिएको बेला, यो प्लेसबोको तुलनामा शरीरको वजन, कुल कोलेस्ट्रल, सीरम कम-घनत्व लिपोप्र्रेटोन कोलेस्ट्रोलमा निकै कम भयो।
आधारभूत शरीरको वजन कम से कम5प्रतिशतमा पर्याप्त कमी देखाउने मोटाइ रोगहरूको प्रतिशत प्लेसबोको तुलनामा सबै सक्रिय हतियारहरूमा उच्च थियो। अधिक वजन मा मधुमेह रोगहरु मा, HbA1c (glycosylated हीमोग्लोबिन) स्तरहरु लाई पनि काफी कम भयो। Cetilistat वजन घटाने औषधि मध्यम देखि हल्का प्रतिकूल प्रभावहरु लाई दिखाया छ, मुख्य रूप देखि स्टीटोररे (जठरांत्रीय प्रकृति) को कारण या listatat भन्दा कम घटना संग। यो औषधि हाल जापानमा अन्य जटिलताहरु संग मोटापे को उपचार गर्न को लागी स्वीकृत भएको थियो।
वजन घटाने पाउडर सारांश
हाम्रो विस्तृत छलफलबाट देखा पर्यो, त्यहाँ धेरै वजन घटाने औषधिहरू छन् त्यहाँ एक विस्तृत श्रृंखला कार्बनिक यौगिहरूबाट व्युत्पन्न छन्। यी औषधिहरुमध्ये अधिकांश प्रभावकारी हुन पाईन्छ, र उनमें से कुछ एफडीए और जापान जैसे विभिन्न अधिकार क्षेत्र द्वारा मोटापे के उपचार के लिए कुछ उल्लेख किया गया है।
वजन घटाने औषधीको अनुसन्धान गर्दा धेरै घण्टा खर्च गरेपछि, हामी केहि 2018 विश्वको बेचे-बेचेको वजन घटाने पाउडरको आपूर्ति गर्दछौं। यो वजन घटाने पाउडर पूरकहरुमा orlistat वजन घटाने पाउडर र लोरस्सेसर वजन घटाने पाउडर समावेश गर्दछ। कुनै औषधि पसलमा पाइने वजन घटानेको पूरकको कपाल जस्तै, यो वजन घटाने औषधिहरु जो चिकित्सकीय पेशेवरहरु द्वारा निर्धारित गरिएको छ एफडीए र धेरै अन्य प्राधिकरणहरु को अनुमोदन को टिकट प्राप्त गर्न को लागि टेस्ट देखि गुजर रहेको छ। हामी अत्यधिक अनुशंसा गर्छौं कि तपाइँ यिनी ड्रग्स को लागी किनकी उनि केवल कुशल तर प्रयोग गर्न को लागी सुरक्षित हुन सिद्ध भयो।
उद्धृत सन्दर्भ सूची:
7 उत्तम नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स) 2018 को बजार मा	Armodafinil को बजार मा7बेस्ट नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स)